Ayyaana akko wajjiin - Contes pour le français langue seconde
Ayyaana akko wajjiin Les vacances avec grand-maman
Odongo fi Apiyoon abba isaani wajjiin magaala kessa jiraatu. Ayyaana dhufa jiruu hawwidhan eeggachaa turan. Manni barumsaa waan cufamef oto hinta’in akkoo isaani bira waandemanif. Akkoon isaanis lafa qurxxumin itti argamu haroo tokko bira jiratan.
Odongo fi Apiyon bayee gammadan sabaaban isaas akkoo isaani wanargatanif. Guyyaa tokko dura imala gara ganda ishee godhamuf qopha’an. Hirribnis oto isan hinfudhatin halkan guutuu wa’ee ayyannichaa hasa’a bulan.
Barii sana konkolaata abbaa isaanitin deeman. Karaa isaani gubbatti benensoota daggalaa, garreen fi masii shayi bira kutani dhaqan. Imalaa isaani gubbtais sirbaa deeman.
Yeroo muraasa booda hirribini isaan fudhatee rafan.
Yeroo gandaa gahan abban isaani hirribarra isan kaase. Yeroo ganda sana gahan Akkoon isaani Nyar-Kanyadan muka jala afaa afatee ciiftee jirti. Nyar-Kanyada jechuun itaala ummata Kaynada jechuu dha. Dubarti barredu fi cimtuu turtee.
Nyar-Kanyadan sibaafi gammachuudhan isaan fudhaate. Akkakileen ishees kennaa magaalaa irra fidan kan akkoo isaanitif laatudhaf baye gammadan. “Dura kennaa ko banaa jette Odongon.” “Lakki kiyya duraa banaa,” jedhee Apiyoon.
Eegaa kenna sana bantee booda, Nyar-Kanyadan akaakilee ishee hala ummaa tureen ibifitee.
Sana booda Odongo fi Apiyon gara alaa bahani billabillo fi simbrroo ari’aa taphatan.
Muka gubbaa korani bishaan kessati kufan.
Gara galagalaa gara manaatu irrbataaf debi’an. Oto nyataa hinxummurin hiribinni isan qabe.
Barii isaa abban isaan ijoole sana Akko isaani birati disee gara magaalaa deebi’e.
Odongo fi Apiyon akkoo isaani hojii manaatin gargaaran. Buphaa fi kuddara sassabudhan gargaaran.
Nyar-Kanyadan ijoole akakille ishee ugaali fi itto qopheesu barsistee. Ruzza akkati tolchani qurxxummi wajjiin nyatan ittiagrasiste.
Guyyaa ganama tokko Odongon sa’atti akko isaa gara margati ofee. sawaan suni gara masii ollati sente. Abbaan maasii sana bayee Odongoti aare. Bayee isaan lolee. Guyyaa sanairra calqabee gurbichi sanii akka masii namaa hinseene ofegganno gari godhe.
Yeroo biraa immo ijoolen Nyar-Kanyadan wajjiin gara gabbayaa deemtee. Isheenis kudraa fi samuna gurgurta qabde deemtee. Apiyon gatii meshaalee himmu calqabe. Ondongonim meeshaale maamiltonni bitan waltiqarqabaa ture.
Gara galgalaa shahii chayi wajjiin dhugan. Akkoo isaani maallaqa lakka’udhan gargaran.
Osoo bayee hinturin yeroon boqqonna isaani dhumee ijoolen gara magaalaa debite. Nyar-Kanyadan odongo dhaf kophii Apiyoodhaf immo shurrabi kenetef. Dhiyana oolchaa isaanif laatte.
Yeroo abban isaani isaan fudhachudhaf dhufu ijoolen deemu hinbarbanne. Ijoolen Nyar-Kanyadan akka isaani waliin demtu kadhaate. Ishe akka kofuu jette, akkan jetten, “Ani magalaa deemuudhaf bayeen dulomme kanaafu ani asumatin isin eega.”
Odongo fi Apiyon hammatani naggati ta’ii jedhanin.
Yeroo Odongo fi Apiyon gara mana barumsaa dhaqan wa’ee badiyaa hiriyota isaanit himan. Ijoolen tokko jireenya magaala dansaa jedhani yadaan. kun immo badiyyan dansaa dha jechuu calqaban. Hundi isaani garu Odongo for Apiyon akko dansaa akka qabaan waligalan.
Gadoo Dammaqajelchitu Waan Vusi waa’ee obboloetti ishe jette Muzaa Akko